Dowladda Qatar oo si adag u cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay muqdisho. | Dayniile.com
Home Warkii Dowladda Qatar oo si adag u cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay muqdisho.
Dowladda Qatar oo si adag u cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay muqdisho.
Bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qadar ayaa lagu sheegay in ‘dowladda ay cambaareyn xooggan u jeedisay weerarkii ka dhacay bar koontoroo oo ku taal degmada Xamar Jajab, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac’.
Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegatay mas’uuliyadda weerarkii shalay.
Previous articleKu-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka oo sharci daro ku tilmaamay in Rooble waan waan la galo farmaajo
Next articleDowladda Djibouti oo loo haysto dad rayid ah oo la sheegay in guryahooda lagala baxay
Maxamed Daahir Afrax Waa Qoraa caan ah oo bulshada Soomaaliyeed si fiican u taqaano, Waxaa uu qoray bugaag iyo sheekooyin sida Maana-faay, Waxaa uu...
Faahfaahin Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Galmudug & Ahlu Sunna oo ka...